Buy Canrenone powder (976-71-6) HPLC ≥98% | AASraw
/ Products / R & D Reagents / Poids Canrenone (976-71-6)
SKU: 976-71-6. Sokajy: R & D Reagents
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Canrenone vovo (976-71-6), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Vovonan'ny Canrenone dia narotsaka tao amin'ny doses 2 82 mg sy 2 × 164 mg isan'andro nandritra ny fe-potoana nandritra ny andro 10 ho an'ny marary diabetika raha tsy misy ny aretim-po, ny atin'ny fo na ny nify. Ny fipoiran'ny algorabôma taloha sy ny albatrans Plasma dia nitombo kely ihany nandritra ny fitondrana roa.
Lahatsary vovoka Canrenone
Vovonan'ny Canrenone ireo karazana fototra
Name: Vovonan'ny Canrenone
Cycle poids de poids
MIARAHA-MIASA (S): Vovonan'ny kanôna
ANARANA GENERIKA (S): Contaren, Luvion, Phanurane, Spiroletan
Fampiasana vovoka Canrenone
Ny habetsaky ny plasma Canrenone sy ny 'metabolites total' taorian'ny basin'ny hydrolyse dia nampitahaina tamin'ny lohahevitra ho an'ny tanora sy zokiolona manaraka dingana tokana sy maro amin'ny spironolactone. Taorian'ny voalohany fatra tamin'ny andro 1, ranon-dra haavon'ny ny Canrenone manta vovoka sy "tanteraka metabolites 'dia ambony kokoa amin'ny tanora noho ny tamin'ny be taona vondrona, ary manan-danja ny fahasamihafana hita eo amin'ny roa sokajin-taona ao amin'ny AUC ho an'ny Canrenone vovoka sy' tanteraka metabolites '. Na dia izany aza dia nihena ny fahasamihafana misy eo amin'ny sokajin-taona roa taorian'ny dinganina maromaro tamin'ny Andro 8, ary ny haavon-tsavona efa mialoha ny dose dia ny vovony poakazo Canrenone sy ny 'metabolites total' dia avo kokoa amin'ny lohahevitra be antitra. Ny habetsaky ny fihenan'ny poten'ny Canrenone sy ny 'metabolites total' dia avo kokoa amin'ny zokiolona noho ny amin'ireo tanora. Samy nafatotra tamin'ny proteinina plasma ny vorona mahazatra Canrenone sy ny asrin-kaornoika, saingy tsy nisy fahasamihafana hita teo amin'ny antokon'olona roa amin'ny fiarovana proteinina. Ny fahasamihafana hita eo amin'ny sehatry ny plasma aorian'ny dingana tokana sy maromaro eo amin'ny lohahevitra antitra sy tanora dia mety ho vokatry ny antony maro toy ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny taona; Ny fiheveran'ny ray aman-dreny ny fihenanam-bolo; ary / na ny fihenan'ny fizarana ny zava-mahadomelina.
Inona ny dingan'ny vovo-kaneranana
Matetika, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia ampy ny 50-200 mg isan'andro, toy ny dosie tokana na amin'ny fitantanana maro.
Amin'ny toe-javatra faran'izay mafy, ny dosage voalohany dia azo zaraina amin'ny 300 mg na mihoatra, avy eo dia ampifanarahina amin'ny valim-pitsaboana sy ny indostrian'ny laboratoire ny dosie.
Ny fomba fiasan'ny Canrenone
Ny fampiroboroboana fampiroboroboana ny HPLC dia natao tao amin'ny Quadrupole spectrometer triple quadrupole TQ4 Quantum Discovery miaraka amin'ny rafitry ny autosampler Aria CTC HTC. Ao anatin'ny ionisation ny elektrôlôjiana tsara indrindra, ny ion-pandrenesana hita dia ny molekiolan'ny ionona (M + H) + m / z 341 ho an'ny vovony Canrenone. Ny alfaxalone (precursor ion m / z 333; 1 μg) dia nampiasaina ho fenitra anatiny. Raha teo am-pifanarahana ny fifampiraharahana, ny ibn sobika lehibe dia m / z 107.1 sy 91.1 ho an'ny vovony poakan'ny Canrenone sy m / z 297.3 sy 315.3 ho an'ny alfaxalone. Ireo iion sobika dia nampiasaina ho toy ny singulier sy ny ion qualificaire mba hampiditra manokana ny fandidiana. Tandrify fisarahana ny steroids dia nahavita nampiasa ammonium acetate (5 MG) / methanol amin'ny (60: 40, 0.3 ml / min) teo amin'ny rano C18 T3 ATLANTIS HPLC tsanganana (3 μm; 100 × 2.1 mm) ao amin'ny 25 ° C. Nihena ny gradient iray miakatra avy any amin'ny 40 ka hatramin'ny 90% methanol, miaraka amin'ny fotoana maharitra amin'ny 8 minitra.
Ny fametrahana ny mari-pahaizana be dia be dia natao tamin'ny famakiana mari-pamantarana enina sy inter. Mahafa-po recoveries ny Canrenone vovoka sy alfaxalone (106.2% (havana fitsipika fahadisoan-dàlana (RSD) 9.5%) sy 102.2% (RSD 4.7%)) dia nahavita nanaraka ranon-javatra-ranon-javatra fitrandrahana ny ihany no 25 μl ranon-dra amin'ny ethyl acetate (1: 10). Ny fetran'ny fanandramana dia 5 ng / ml ary ny fetran'ny ambany dia ny 15 ng / ml. Ny tetik'ady dia linitera (r = 0.9936) noho ny fifangaroana (5 ng / ml ka hatramin'ny 5 μg / ml). Ny sahy miteny tokoa mety ho quantitation ny Canrenone manta vovoka amin'ny vondrona marary ilay nandray ny 400 levitra levitra, izay concentrations amin'ny ranon-dra no hita ho any an-isan-karazany-5 45 μmol / l.
Ny soa azo avy amin'ny vovo-kaneranana
Ny vovo-koditra Canrenone no metabolita lehibe indrindra amin'ny spironolactone. Amin'ny alàlan'ny rafi-pitantanana dia miara-miasa amin'ny aldosterone izy amin'ny alàlan'ny fampindrana azy amin'ny toeran'ny receptor eo amin'ny ambaratongan'ny ampahany lavitra amin'ny renirano sy ny fanangonana; Izany dia miteraka fitomboan'ny diéreuse sy natriuresis ary fihenan'ny kaliuresis. Raha oharina amin'ny spironolactone dia manana tombony amin'ny fotoana lava ambany. Tahaka ny spironolactone, na izany aza, tsy misy hetsika ao amin'ny taranjam-pandaminana mifangaro na amin'ny resaka ara-dalàna miaraka amin'ny tsiambaratelo aldosterone ambany.
Taorian'ny fitantanana am-bava, dia voadio haingana ny volo mangatsiaka Canrenone, ka tonga amin'ny taha miisa roa farafahakeliny. Ny antsasak'adiny dia manodidina ny ora 18 ary, raha oharina amin'ny spironeolactone, dia tsy miova, ao anatin'ny ora 72, miaraka amin'ny urine sy ny faeces mitovy mitovy.
Ny vovo-kaneranana dia aseho amin'ny toe-pahasalamana, izay mahatonga ny aldosteron hivezivezy hitehirizana ny rano sy ny sodium ary ny kaliuria. Ilaina amin'ny fitsaboana ny ascites amin'ny cirrhosis ny aty, na dia ampifandraisina tsy tapaka amin'ny valinteny amin'ny tranga manokana aza ny dosage.
Ny vovon-tsolotsaina Canrenone dia metabolita fitiliana amin'ny spironolacton, asidra asidra, ary potassium canrenoate, ary heverina fa tompon'andraikitra amin'ny vokatr'izy ireo. Izany dia efa hita ny ampamoaka noho ny eo ho eo 10 mba 25% ny potasioma-hiantra vokatry ny spironolactone, fa metabolite iray hafa, 7α-thiomethylspironolactone (7α-TMS), mahatonga ho an'ny manodidina 80% ny potasioma-hiantra vokatry ny zava-mahadomelina.
Ny poezia Canrenone dia voalaza fa matanjaka toy ny antimineralocorticoid raha oharina amin'ny spironolactone, nefa dia tsy dia marefo loatra ary mahomby toy ny antandrogen. Toy izany koa ny spironolactone, Canrenone manta vovoka dia mampihena steroidogenic anzima toy ny 11β-hydroxylase, kolesterola lafiny-rojo cleavage anzima, 17α-hydroxylase, 17,20-lyase, ary 21-hydroxylase, fa indray mandeha indray, dia azo lazaina tsy vaika amin'ny fanaovana izany.
Ahoana ny hividianana vovony Canrenone avy any AASraw
Canrenone ronono vovoka
LCZ696 vovoka (936623-90-4)